Zvinotarisirwa Nevatengesi Nekudzivirira Zvinhu Zvepfungwa | Martech Zone
Sekushambadzira - uye zvese zvimwe zviitiko zvebhizinesi - zvave kuwedzera kuvimba netekinoroji, kuchengetedza huchenjeri hwave chinhu chakanyanya kukoshesa kumakambani akabudirira. Ndicho chikonzero timu yega yega yekutengesa inofanirwa kunzwisisa izvo zvekutanga zve njere mutemo mutemo.
Chii chinonzi Intellectual Property?
Sangano reAmerica repamutemo rinopa dzimwe kodzero uye dziviriro kuvaridzi vedzimba. Kodzero idzi uye kudzivirirwa zvinotowedzera kupfuura miganhu yedu kuburikidza nezvibvumirano zvekutengeserana Intellectual property inogona kuva chero chigadzirwa chepfungwa icho mutemo unodzivirira kubva mukubvumidzwa kushandiswa nevamwe mukutengeserana.
Intellectual property - kusanganisira zvigadzirwa, bhizinesi nzira, maitiro, zvigadzirwa, mazita ebhizinesi nemarogo - zvinogona kuve pakati pezvinhu zvakakosha zvebhizinesi rako. Semuridzi webhizinesi iwe unofanirwa kunzwisisa kuti kuchengetedza yako yehungwaru kwakakosha sekuchengetedza chero imwe pfuma pane yako bharanzi sheet. Iwe unofanirwa kunzwisisa kodzero nemitoro inoenderana nekugadzirisa uye kuita mari yako yehungwaru pfuma.
Uchishandisa IP Mutemo Kudzivirira Yako Intellectual Property
Kune mana akakosha marudzi epfuma yehungwaru: patents, trademark, kodzero, uye zvakavanzika zvekutengeserana.
Kana iwe wagadzira tekinoroji yepamutemo, federal patent dziviriro inopa kambani yako iyo yakasarudzika kodzero yekuita, kushandisa, kutengesa kana kuendesa kugadzirwa kana kuwanikwa kweiyo imwe nguva. Chero bedzi tekinoroji yako iri yenhau, inobatsira uye isingaite, unogona kupihwa kodzero dzega pakushandiswa kwayo kunoenderera kwenguva yepamutemo.
Kufaira patent kunogona kuita kwakaoma uye kureba maitiro. United States inoshanda pasi pekutanga kufaira, kwete yekutanga kugadzira system, zvinoreva kuti muvambi aine zuva rekutanga rekutora anowana kodzero dzechibvumirano. Izvi zvinoita kuti nguva yekufaira kwako ive yakaoma. Kuchengetedza zuva rekutanga rekufaira, mabhizinesi mazhinji anosarudza kutanga faira kuitira nyore-kuchengeteka patent patent. Izvi zvinovapa gore rekupedzisa isiri-yechinguvana patent application.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti patent yakaburitswa neUnited States Patent uye Trademark Hofisi (USPTO) inoshanda chete muUnited States. Kana kambani yako ichikwikwidza kunze kwenyika uye ichida kuchengetedzwa kwepatent kune dzimwe nyika, unofanirwa kunyorera kwese kwaunoda kuchengetedzwa. Chibvumirano chePatent Cooperation chinoita kuti izvi zvive nyore nemaitiro ekufaira chikumbiro chimwechete chepasi rose panguva imwechete munyika dzinosvika zana nemakumi masere nesere.
Sezvo chero nyanzvi yekushambadzira ichiziva, zviratidzo zvekutengesa inzira yakakosha yekuchengetedza zvigadzirwa zvekambani. Zviratidzo zvinodzivirira chero mamaki anosarudzika, senge mucherechedzo kana zita rechiratidzo, izvo zvinosiyanisa zita rako kubva kune vamwe vari mumusika.
Kungoshandisa chiratidzo chebhizimusi mune zvekutengeserana kunogona kutungamira kudziviriro yemutemo yakajairika. Zvakadaro, kunyoresa mamaki ako neUSPTO hakungovimbise chete kuti wakachengetedzwa zvizere, asi zvakare kunowedzera seti yemishonga iwe yaunowana kana mumwe munhu akatyora chiratidzo chako. Kunyoresa nekudaro kunopa makomborero akakosha kumakambani, kusanganisira ziviso inovaka kuruzhinji, kodzero yega yekushandisa mucherechedzo maringe nemakirasi ezvinhu zvezvinhu kana masevhisi akanyorwa mukunyoresa, uye chikonzero chezvematongerwo enyika chekukanganisa kupi nekupi.
Kushambadzira chiratidzo chinosanganisira kugadzirwa kwemabasa ekutanga, kungave kuri mumhando yekushambadzira mifananidzo, yekunyora kopi kana chimwewo chinhu chinoratidzika kunge chiri nyore senge pasocial media post. Aya marudzi ebasa anogona kudzivirirwa nekopiriti. Kopiraiti inzira yekudzivirira yakapihwa pasi pemutemo wekopirati wekopi ye "mabasa epakutanga emunyori" akagadzwa nepakati pekutaura. Izvi zvinogona kusanganisira zvese zvakaburitswa uye zvisina kunyorwa mabasa ehungwaru senge nhetembo, zvinyorwa, mafirimu, uye nziyo, pamwe nekopi yekushambadzira, graphic art, dhizaini, software yekombuta uye kunyangwe zvivakwa.
Muridzi wekopi anogona kudzivirira vamwe kutengesa, kuita, kugadzirisa, kana kuberekazve basa pasina mvumo- kunyangwe mabasa akafanana akafanana anoshandiswa nechinangwa chakafanana. Izvo zvakakosha kuti uzive, zvisinei, kuti ma copyright anongodzivirira chete chimiro chekutaura, kwete izvo zviri pachena chokwadi, mazano, kana nzira dzekushanda.
Kazhinji, kodzero dzekopirita dzinobatirira pamusiki webasa idzva panguva yekusikwa kwaro, asi iwe unogona zvakare kusarudza kuzvinyoresa nenzira kwayo neUnited States Copyright Office. Kunyoresa kunopa zvakakosha, zvinosanganisira kuve neruzhinji rekodhi rekodzero, kumwe kufungidzira kwechokwadi, uye kodzero yekuunza mhosva yekukanganisa uye kutora zvinokuvadza zviri pamutemo nemitero yegweta. Kunyoresa neUS Customs zvakare kunokutendera kuti udzivise kuunzwa kwemakopi anokanganisa ebasa rako.
Chimwe chikamu chezvivakwa zvehungwaru izvo zvakakosha kuchengetedza zvakavanzika zvekambani yako. "Chakavanzika chekutengeserana" chinotsanangurwa seyakavanzika, ruzivo rwemidziyo iyo inopa bhizinesi rako nemakwikwi mukana. Izvi zvinogona kusanganisira chero chinhu kubva kune vatengi rondedzero kune ekugadzira matekiniki kune maitirwo e analytics Zvishambadziro zvakavanzika zvinonyanya kuchengetedzwa nemutemo wenyika, uyo unowanzo fananidzwa mushure meYunifomu Yekutengesa Zvakavanzika Mutemo Mutemo unofunga ruzivo rwako rwekuchengetedzeka sechakavanzika chekutengeserana kana:
Ruzivo irwo fomula, pateni, kuumbiridza, chirongwa, chishandiso, nzira, maitiro, maitiro kana chimwe chiridzwa chakachengetedzwa;
Chakavanzika chayo chinopa kambani ihwohwo chaihwo kana hungave hukoshi hwehupfumi nekusazivikanwa kana nyore kuzivikanwa; uye
Iyo kambani inotora nhamburiko dzakaringana kuchengetedza yayo yakavanzika.
Zvakavanzika zvekutengeserana zvinodzivirirwa nekusingaperi kusvikira kuburitswa pachena kwechakavanzika kwaitika. Makambani ese anofanirwa nekudzivisa kusazivisa kuzivisa. Kutevedzera zvibvumirano zvisina kuburitswa (NDAs) nevashandi uye nevechitatu mapato ndiyo nzira iri pamutemo yekuchengetedza zvakavanzika zvako zvebhizimusi. Izvi zvibvumirano zvinoratidzira kodzero nemabasa ane chekuita neruzivo rwekuvanzika, uye zvinokupa mukana wekushandisa zvisirizvo zvakavanzika zvako zvekutengeserana.
Kusashandiswa zvisiri izvo kunoitika kana chakavanzika chekutengeserana chikawanikwa pamwe nenzira dzisiri idzo kana kuburikidza nekutyora chivimbo, uye chichiitika mudare. Kambani yako yakashandisa zvakadii NDAs chingave chinhu chinoshandiswa nedare kuona kana wakatora "kuedza kwakaringana kuchengetedza zvakavanzika," saka zvakakosha kuti uve nechokwadi chekuti kambani yako irikushandisa NDA dzakanyatsogadzirwa nekuda kwekuchengetedza IP .
Ane ruzivo IP Gweta Ndiro Rako Rwekutanga Rudziviriro
Mumamiriro ezvinhu anhasi anokwikwidza, zvakakosha kuti kambani yako inzwisise zvizere midziyo yehungwaru uye nekuzvidzivirira nemazvo. Gweta repfuma rinogona kubatsira kambani yako kuwedzera mukana wako wekukwikwidza kuburikidza nehurongwa hwakazara hwekuchengetedza IP.
Wako IP gweta ndiyo yako yekutanga mutsara wekuzvidzivirira kune vamwe vanoshandisa kana kushungurudza IP yako. Kunyangwe iwe uchifambidzana neanokwanisa kunze gweta, senge kuburikidza ne Priori Network, kana kuhaya wenguva yakazara-mumba kuraira, gweta reIP rakanyatso shongedzerwa kuchengetedza IP yako mukana wekukwikwidzana unofanirwa kuve.
Tags: Copyrightruzivo rwehupfumiipmutemozviri pamutemopamutemo trademarkprioripriori zviri pamutemoyakanyoreswa trademarktmzvakavanzika zvekutengeseranachiratidzo
Ndeupi mutemo weCAN-SPAM?